Sugaronline News: ZIMBABWE: Invaders ordered off cane plantations
ZIMBABWE: Invaders ordered off cane plantations
Published: 11/10/2017, 12:03:18 PM
Masvingo's Minister of State for Provincial Affairs Dr Paul Chimedza said his office will uphold President Mugabe's directive to bar sugarcane farmers from occupying land owned by Tongaat Hulett Zimbabwe Limited in Chiredzi. The new farmers were targeting 4,000 hectares (ha) of sugarcane plots owned by Tongaat Hulett, according to Zimbabwe's Herald newspaper.
The Ministry of Lands and Rural Resettlement recently withdrew offer letters of more than 200 new farmers who had been allocated plots on the company's land. Dr Chimedza, who was addressing hundreds of ZANU-PF supporters at Chitsanga Hall in Chiredzi on Tuesday, said Tongaat Hullet was prepared to partner Government in the development of more than 10,000ha of new sugarcane plots.
Dr Chimedza said in addition to resuming development of 4,000ha under the Kilimanjalo Project, the company will introduce more projects that would see more than 10,000ha of sugarcane being developed. Chiredzi West Member of Parliament Cde Darlington Chiwa, however, challenged Minister Chimedza to look into multiple land ownership by certain individuals.